CHERRY HYERRY "CHERRY WONDERFUL": SHARAXAAD KA DUWAN KALA DUWAN, POLLINATORS, HARDINESS JIILAALKA, SAWIRRADA - CHERRY
Cherry kala duwan "Cherry Wonderful": tayada iyo astaamaha, faa iido iyo qasaaro
Xagaaga oo kasta oo deggan xeryaha ayaa koraan geedo miraha iyo berry.
Waxaa ka mid ah tirada badan ee noocyada jeeriga, badanaa waxay door bidaan "Miracle Cherry", oo aan ku sharraxnay maqaalkeena.
Kuwa ugu caansan ee bannaanka u ku raaxaysta "Miracle Cherry". Aan aragno waxa "chaos" cherry. Kala duwan - natiijada ka soo gudbidda noocyo gaar ah oo jeeriga iyo jeeriga. Berry waxaa la helay natiijada shaqada ee breeder iyo Fiisooyinka ka Ukraine Liliya Taranenko. Kala duwan waa noocyo kala duwan oo ah cherry "Valeriy Chkalov" iyo noocyo kala duwan oo cherry "Griot".
Waa muhiim! Marka laga beerto geedo yar yar, waa suurtogal in aan si qoto dheer u qotonin dhulka, sababtoo ah taasi waxay sababi kartaa dhimashadooda.
In muuqaalka, sapling waa mid aad u la mid ah cherry macaan - waxa uu leeyahay nooca geedka, xoog koritaanka celcelis ahaan, branching. Haddii aadan qorsheynin inaad sameysid taaj, waxay yeelan doontaa qaab istiraatiijiyadeed oo cidhiidhi ah, oo kor u qaadaya.
Hubi noocyada kala duwan ee jeeriga sida "Youth", "Vladimirskaya", "Girl Chocolate", "Black Large", "Abundant", "Turgenevka", "Besseya", "Ural Ruby", "Frost", "Chernokorka", " Lyubskaya, Zhukovsky, Mayak.
Laamuhu waxay ku yaallaan xaglo ba'an oo jir ah. Dhirta geedka "Cherry Wonderful" wuxuu ku saabsan yahay 3 mitir.
Geedka wuxuu leeyahay caleemo waaweyn, oo aad u la mid ah caleemaha jeeriga. Waxay leedahay dhumuc, siman, awood leh, laamood oo toosan oo leh midab madow. Burooyinkuna way weyn yihiin, waxay ku kala duwan yihiin cufnaanta.
Miro ayaa aad u ballaaran, miisaanka hal berri waa 10 g. Waxay leeyihiin qaab qaabaysan, mugdi madow oo midab leh, oo leh maqaar cufan.
Ma taqaanaa? Tan iyo 1997, cherry - calaamad rasmi ah ee gobolka Mareykanka ee Utah. Sannad kasta maalmaha ugu dambeeyey ee February, fasax loogu talagalay in looxiro cherry waxaa loo dabaaldegaa halkan.
Berry waxay leedahay dhadhan macmacaan macaan. Jidhku wuxuu leeyahay caraf udgoon oo lagu qasi karo khudrad fudud.
Wixii dhalidda sare, iskutallaabta-pollination ayaa loo isticmaalaa. Natiijada ugu fiican ayaa la gaari doonaa haddii sanduuqa lagu sameeyo geedka.
Tani waxay sabab u tahay ubax hore ugu horeysay ee hybrid, taas oo u jajaban leh noocyo hore ee jeeriga macaan. Waxsoosaar wayn ayaa lagu gaari karaa iyadoo la isticmaalayo pollinators soo socda ee Miracle Cherry:
Kala duwanaantu waxay leedahay maaddada steril, sidaas darteed ma awoodo in ay u dhaqmaan sida pollinator on isaga u gaar ah.
Goolashada ubaxyada ubaxa waxay dhacdaa inta lagu jiro koror hal sano ah, taas oo horseedaysa midhaha hore. Goosashada 4-8 berry ku saabsan farabadan waxaa la ururin karaa sannadka saddexaad laga bilaabo bilowga xilliga jaanta.
Bilowga xilliga ubaxku wuxuu la jaanqaadayaa sameynta cimilada diiran oo diiran. Inta badan waxay ku dhacdaa badhtamaha May. Si kastaba ha noqotee, haddii noocyada kala duwan ee lagu beeray gobollada leh jawi aad u daran, xilliga ubaxku wax yar ayuu isbeddelaa oo wuxuu bilaabmaa dhammaadka Juun.
Dalag buuxa ayaa laga goyn karaa dhamaadka bisha Juun, fruiting wuxuu dhacaa sanad kasta.
Waa muhiim! Geed khafiif ah wuxuu u baahan yahay waraabin badan. Waxaa lagu talinayaa 2 jeer todobaadkii si uu u guto ciidda qoyaanka ee wareegga agagaarka jirkiisa, kharashka 15 litir geedka.
Kala duwanaanshuhu waa mid sareeya, ilaa 15 kg oo ah nooca berry ah ayaa laga goyn karaa hal geed.
Sababtoo ah joogitaanka diirka cufan, berry waxay leeyihiin gaadiid aad u fiican - waxaa lagu kaydin karaa ilaa 10 maalmood.
"Duke" ama "Miracle Cherry" waxay qabaan adkaysiga jiilaalka wanaagsan, laakiin laguma talinayo in lagu koro laydhka dhexe.
Warshadu waxay difaacdaa cudurrada iyo cayayaanka badan, maadaama ay leedahay sifooyinka ugu wanaagsan ee ay ka kooban tahay awooda.
Geedka sidoo kale marar dhif ah ayuu ka jiraa infekshanka fungal, ma aha inuu ka baqo monilliosis iyo cocomycosis.
Maaddaama dhadhanka ugu fiican ee berry ah, waxaa loo isticmaali karaa in la qaboojiyo, geedi socodka iyo kariyo iyaga ka soo macaanka, casiir, miro la jarjaray.
Of jeeriga waxaa badanaa laga dhigay marmalade, qalajiyey miraha.
Sida noocyo kala duwan, warshadani waxay leedahay faa'iido iyo faa'iido daro.
Waa kuwan soo-saarka geedka:
suurtogalnimada helitaanka goosashada hore iyo tan qani ah;
adkaysiga jiilaalka wanaagsan;
difaaca jirka ee cuduro badan oo inta badan saameyn ku leh dhirta kale;
dhadhan fiican macaan.
Culaysyada geedka waxaa ka mid ah:
baahida loo qabo in loo isticmaalo pollinators geed, sida kala duwan oo aan is-bacrin;
baahida loo qabo in si joogto ah u fuliso samaynta taajka.
Ma taqaanaa? Dalka Japan, Sakura waa gabbaro beergooyska ah: haddii ubaxu geedka geedka yahay, waxaad filan kartaa goosashada qani ku ah bariiska.
Iyada oo habka saxda ah ee daryeelka iyo beerista geedaha, iyadoo la isticmaalayo sharaxaad this, aad hubaal noqon doonaa awood u hesho goosashada dhadhan fiican leh.